Shabakadda Amiirnuur – Page 103
Madaxweynaha DF ayaa dhowr maalmood ka hor booqasho ku tagay gobolada Wuqooyi bari ee uu ka taliyo maamulka Puntland wax yar uun kadib markii xilalka laga qaaday sadax wasiir Puntland-na la siiyay wasiirka arimaha dibadda. Cabdi Wali Gaas ayaa juhdi iyo dhaqaale badan ku bixiyay soo dhaweynta Farmaajo si uu […]
Askari Ka Tirsan Dowladda oo Lagu DIlay Baladweyne.
Askari ka tirsan ciidamada dowladda federalka ah ayaa saacado ka hor lagu khaarajiyay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Wararka ayaa sheegaya in askarigan lagu weeraray bam gacmeed taasoo sababtay inuu labo u kala go’o islamarkaana uu geeriyoodo sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan maamulka magaalada oo la hadlay warbaahinta […]
War degdeg ah: Askar Ka Tirsan DF oo Lagu Dilay Dagaal Ka Dhacay Sh/dhexe.
Dagaal galinkii dambe ee maanta ka dhacay gobolka Shabeelaha dhexe una dhexeeyay ciidamada Xarakada Al-Shabaab iyo kuwa dowladda federalka ah ayaa lagu waramayaa inuu goor dhow soo gabagaboobay kaasoo sababay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Wararka naga soo gaaraya gobolka Sh/dhexe ayaa sheegaya in dagaalku uu ka dhacay degaanka […]
Degdeg: Al-Shabaab oo Gaadiid Dagaal Ku Furtay Weerar Ay Ka Geysteen Jasiira.
Ciidamo ka tirsan Xarakada Al-Shabaab ayaa maanta weeraray askar ka tirsan ciidamada dowladda oo hawl gallo dhir jaris ah ka waday degaanka Jasiira ee gobolka Shabeelaha hoose. Natiijada weerarkan ayaa noqotay sida tan:- waxaa dowladda laga dilay hal kaskari oo lagu magacaabi jiray Xassan Wiifow, hal gaari waa laga gubay […]
War kasoo baxay wasaaradda G/dhigga dowladda Federaalka ayay ku sheegtay in ciidamada Kummaandooska ee loo yaqaan Danab ay Burburiyeen saldhig melleteri oo Shabaabul Mujaahidiin ay ku laheyd deegaanka Leego ee Sh/Hoose. War kasoo baxay wasaaradda G/dhigga dowladda Federaalka ayay ku sheegtay in ciidamada Kummaandooska ee loo yaqaan Danab ay Burburiyeen […]
Madaxweynaha dowladda federalka ah ayaa socdaalkii uu ku maray gobolada Wuqooyi bari ee Soomaaliya kusoo bandhigay hadallo iyo ficillo uu ku muujinayay inuu yahay nin bala ah. Sawirrada laga soo qaaday madaxweynaha waxaa kamid ah midka kore ee aad aragtaan ee uu dhabta saartay wiilka yar. Dabcan wuxuu muujinayaa sida […]
Dhagayso Warbixin: Buug Sabab U Noqon Kara In Donald Trump Laga Eryo Aqalka Cad.
Dab iyo caro, waa halkudhig lagala soo dhex baxay kitaabka munxarifka ah ee Injiil, taas oo Donald Trump uu adeegsaday hanjabaad uu jeediyay madaxweynaha kuuriyada Wuqooyi, balse maalina kuma fakarin inuu noqon doono ciwaanka buug gilgilay tiirarka Aqalka cad ee uu isagu madaxweynaha ka yahay. Dab iyo caro, gudaha Aqalka […]
Diiradda Jimcaha waa barnaamij todobaadle ah oo maanta oo kale lagu falanqeeyo mowduuc muhim ah, waxaana usbuucan lagu falanqeeyay qodob ku saabsan horumarka. https://f.top4top.net/m_7424pbv91.mp3 Ku Dhageyso Tayo Sare Diiradda Jimcaha Ku Dhageyso Tayo Tayo Dhexe Diiradda Jimcaha